Ekwentị Realme nwere igwefoto 64 MP nwere ụbọchị mwepụta ọhụrụ nke gọọmentị | Androidsis
Ọtụtụ ụbọchị gara aga ihe yiri ka ọ bụ akwụkwọ mmado Ekwentị mbụ nke Realme nwere ihe mmetụta igwefoto 64-megapixel, nke agaghị abụ naanị onye mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, mana onye mbụ n'ụwa ga -akwadebe ihe mkpalite ahụ. Teaser ahụ kpọtụrụ ụbọchị August 8 dị ka ụbọchị mmalite ngwaọrụ a, mana ugbu a agọnarị ozi a.
Mpempe akwụkwọ nkwado ọhụrụ apụtala. Nke a na -ejigidekwa otu ihe ịchọ mma nke onye ekwurula, mana ọ na -agbanwe ụbọchị mmalite nke ekwentị ihe nrụpụta 64 MP, anyị kọwara ya n'okpuru.
Dika ihe akwụkwọ mmado nke anyị kpọgidere n'okpuru na -agwa anyị, a ga -eme ka ngwaọrụ ahụ bụrụ nke ọrụ na Ọgọst 15 ọ bụghị na 8 nke ọnwa a ka ekwuputara. Nke a na -egosi na anyị ga -eche otu izu ogologo oge karịa ka anyị tụrụ anya izute ya, nke ga -abụ ihe na -akụda mmụọ maka ndị na -enweghị ndidi bụ ndị na -achọ ịma etu nkọwa foto ndị ejiri foto ihe onyonyo sere dị, nke na -ekwe nkwa nke ukwuu; atụmanya dị n'akụkụ nke a dị oke elu.
Igwe ihe megapixel 1 GW64 Samsung bụ nke ga -eme ọnụnọ na ọdụ Realme. Nke a bụ nha 1 / 1.72 ”buru ibu ma nwee ike weghara foto 64 megapixel nwere mkpebi kacha nke 9,216 x 6,912 pikselụ. Kwadoro site na Samsung 4-in-1 pixel binning ike-akpọrọ teknụzụ Tetracell-ihe mmetụta GW1 nwere ike weghara onyonyo 16-megapixel n'ọnọdụ obere ọkụ.
Ngwa dị omimi, nke anyị amabeghị aha ọ ga -ebu, ga -enwe sistemụ igwefoto quad n'azụ ya, dị ka anyị kpughere n'oge gara aga. Ihe mbụ ga -abụ 64 MP, dịka a tụrụ anya ya. Ndị na -ejide ihe atọ ndị ọzọ ga -abụ oghere oghere sara mbara, ihe mmetụta ToF ma ọ bụ igwefoto raara onwe ya nye maka ọnọdụ eserese, yana oghere nnukwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme smartphone nwere igwefoto 64 MP nwere ụbọchị ọhụụ nke ọhụụ